Wiil Soomaali ah loo xiray dilkii uu ugeystay wiil kale oo Soomaali ah -
Wiil Soomaali ah loo xiray dilkii uu ugeystay wiil kale oo Soomaali ah
Maxkamad ku taala magaaladda Minneapolis ee gobolka Minnesota, gaar ahaan degmadda Hennepin ayaa waxaa maanta dacwo lagu soo oogay Farxaan Cumar Hersi oo ah 29 jir Soomaali ah.
Farxaan Cumar ayaa dacwadda lagu soo oogay ay tahay dambi iyo dil la xiriira Cabdullahi Sacid Cawil oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo uu Farxaan ku dilay habeenkii Khamiista ee ay taariikhda bisha August ahayd 8/31/2017 magaalada Minneapolis.
Sida dacwadda lagu soo oogay ku qoran, Farxaan Cumar ayaa waxaa qabatay ama laga dhex arkay muuqaal video-ah oo ay duubtay kaamerad ku taalay goobta ay toogashadu ka dhacday ee Allaha u naxariistee Cabdullahi lagu toogtay.
Farxaan Cumar ayaa loo haystaa dila Cabdullahi
Cabdullahi ayaa saqdii dhexe ama markii ay saacadu ahayd 3:45 subaxnimo lagu dilay agagaarka xaafada Cedar ama meesha loo yaqaano 7 corners ee ku taala geeska xaafada Cedar ee ay Soomaalidu degen yihiin.
Marxuun Cabdullahi Sacid Cawil
Waxaa maalman dib u soo noqonaya is xabadayntii iyo dilalka dhallinyarada Soomaalida ah loo geeysto ama ay isku geystaan. Waxaa maanta oo Talaado ah gobolka Minnesota lagu aasay wiilkale oo Soomaali ah oo habeenimadii Axada la toogtay. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa sidoo kale gobolka Ohio iyo dalka Canada lagu dilay wiilal Soomaali ah.
Halkan ka akhriso dacwaddii lagu soo oogay Farxaan Cumar: Akhri
Related Items:Featured, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis, Youth
Wiil kale oo Soomaali ah ayaa xalay lagu toogtay magaaladda Minneapolis
Wiil 19 jir ah oo ku geeriyooday shil gaari gobolka Minnesota